Anchoring mwekota PA-1500.1 bụ onwe-Ịgbazi, iji ejigidesikwa LV-ABC edoghi na gwara mmanụ na-anọpụ iche ozi. Ọzọkwa ngwaahịa a bụ adabara LV-ABC edoghi na iferi-anọpụ iche ozi, wedges nwere ike ntekwasa na carborundum dịkwuo njikọ.
The mwekota mejupụtara anwụ casted aluminum alloy ahụ na onwe-ukpụhọde plastic wedges nke mwekota na-anọpụ iche ozi. Mwekota ahụ mere nke corrosion eguzogide anwụ casted aluminum alloy, ịgbapụta nke igwe anaghị agba nchara, wedges nke ihu igwe na UV eguzogide mesikwuru plastic. The igwe anaghị agba nchara ịgbapụta na-enye ohere nrụnye nke clamps na a mgbodo. LV ABC erughị ala clamps na LV ABC brackets dị ma iche iche ma ọ bụ ọnụ dị ka nzukọ.
Materials: corrosion na-eguzogide ọgwụ na-anwụ casted aluminum alloy, igwe anaghị agba nchara ịgbapụta, faiba glaasi mesikwuru plastic.
ụdị MBL, kN USB size, mm Arọ, n'arọ
Previous: Efefe nkpirikpi Type erughị ala mwekota PA-1000
Osote: LV ABC USB erughị ala mwekota PA-1500
keikuku cable mwekota
cable nkpirikpi mwekota
ala voltaji ABC kwesịrị ekwesị
ala voltaji mwekota
LV ABC erughị ala clamps
ovehead erughị ala mwekota
Nje mwekota PA-1500
Erughị ala-eji jikọta Tụkwasịnụ America
РА 1500 mwekota
LV ABC USB erughị ala mwekota PA-1500
LV ABC USB Anchor mgbodo Ca-1500
OHL nko kpọchie, B-16
Mkpuchi ịkpọpu njikọ, ZOP-11 (1.5-16 / 1 ...